अंगुर खानुका यस्ता छन् फाइदा जान्नुहोस्
Homeसमाचारअंगुर खानुका यस्ता छन् फाइदा जान्नुहोस्
November 8, 2020 admin समाचार 9211
अंगुर स्वा’दका लागि मात्र नभई स्वा’स्थका लागि पनि उतिकै फाइदा ज’नक मानिन्छ । यो स्वादका निकै गु’लियो र अमिलो हुने गर्दछ । यो एउटा रह’रे फल हो । यो जन सुकै बेला पनि से’वन गर्न सकिन्छ ।
अंगुर स’बैलाई मन पर्ने फल’फुल हो अंगुरलाई औषधीको रु’पमा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सबै’लाई थाहा नहुन सक्छ । यसले मानिसको सुन्दर’तासँगै स्वास्थ्यमा समेत राम्रो गर्छ । अंगुर खानाले कब्जि’यतको समस्या’बाट टाढा राखी पाचन’शक्तिलाई स्वस्थ राख्न स’हयोग गर्छ ।
निय’मित अंगुरको सेवन गर्नाले कोलस्ट्रल कम गर्न म’द्दत गर्छ । यसको सेवनले किड्नीको स’मस्या समा’धान गरी युरिक एसिड कम गर्न स’हयोग गर्छ ।
यसको निय’मित सेवनबाट छा’लाको सौन्दर्य, रुघाखोकी आदिबाट छुटकारा पा’उन सकिन्छ । रक्तस्रावको समस्यामा एक गि’लास अंगुरको जुसमा दुई चम्चा मह घो’लेर खाने हो भने निय’न्त्रणमा आउँछ । घाउ, ख’टिरा निको पार्न पनि अंगुर सह’योगी हुन्छ । -OsNepal बाट
अञ्जु पन्त र निशान भट्टराईको ‘ढाकाटोपी’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
आफ्नी आमाको गीतः ‘तिमी र म’ मा साम्राज्ञी आफ्नो प्रेमीसंग (भिडियो हेर्नुहोस्)
सबै ब्लेडको सधैं एउटै डिजाइन किन हुन्छ ? यस्तो रहेछ कारण
March 20, 2022 admin समाचार 1578
ब्ले ड किन बनाइयो ? पक्कै पनि टुटेको मुटु भएका प्रेमी हरूको लागि ताकि तिनीहरूले आफ्नो नशा का’ट्नका लागि होईन् । ब्लेड दाह्री बनाउनको लागि बनाइएको हो । दाह्री त रेजरलेनै गरिन्थ्यो तर जब रेजर
May 8, 2021 admin समाचार 5570
बिहेमा दाइजो कम भएको भन्दै ८ महिनाकी गर्भवती श्रीमतीको ज्या’न लिए (भिडियो सहित)
January 16, 2021 admin समाचार 6779
शिक्षा र चेतनाको अ’भावका कारण दाइजो प्रथा चलेको मानिए पनि शिक्षित र सम्पन्न परिवारमै यसको विकृति झनै बढ्नु दु:खद् पक्ष हो । यस्तो विकृ’ति सबैतिर भए पनि मधेसमा भने यो झाँगिँदै गएको पाइन्छ । केही
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228477)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227443)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226795)